Bakalorea : hifarana ny 31 marsa ny fisoratana anarana | NewsMada
Bakalorea : hifarana ny 31 marsa ny fisoratana anarana
Par Taratra sur 21/03/2017
Hifarana ny 31 marsa izao ny fisoratana anarana amin’ny fanadinam-panjakana bakalorea 2017. « Tokony ho mailo ny rehetra : mpiandraikitra sekoly, mpiadina ary indrindra ny mpiadina miahy tena fa tsy hisy ny famindrampo na « dérogation » ho an’ireo izay tara ny fametrahana antontan-taratasy eny amin’ny sampandraharaha mahefa », hoy ny tale jeneralin’ny fampianarana ambony, Randrianambinina Blanchard, omaly teny Fiadanana.
Momba ny laza adina, volavolain’ny ekipa pedagojika miainga amin’ny lycée 114 ny laza adina. Hamarinin’ny mpiandraikitra voalohan’ny lycée fa mpampianatra marina ao aminy ary mandrafitra ny ekipa pedagojika ilay mpampianatra mandray anjara. Mbola dinihin’ny vaomiera iarahan’ny minisitera telo : Fampianarana ambony, Fanabeazam-pirenena ary Fampianarana teknika ny laza adina rehetra. Ankoatra ny lycée miankina amin’ny fanjakana, misy sekoly tsy miankina vitisivitsy sy lycée teknika mifarimbona hitsongana ny mpampianatra.
Mitokan-toerana mandritra ny 40 andro ny mpampianatra maromaro handamina sy hisafidy ny laza adina farany hozaraina amin’ny mpiadina. Mbola ny ekipa padagojika ihany koa ny misafidy ny mpampianatra hanatanteraka izany. Mpampianatra telo isaky ny taranja, ary tokana ho an’ny LV2 (tenim-pirenena vahiny) sy ny fanatanjahantena adina am-bava no hitoka-monina 40 andro mialoha ny fanadinana bakalorea. « Tokony ho salama tsara ara-batana, mampianatra amin’ny kilasy famaranana nandritra ny 10 taona farafahakeliny, mpampianatra ilay taranja nampiandraiketina azy satria ho tomponandraikitra tanteraka amin’ny laza adina mivoaka izy ireo », hoy ny fanazavan’ny talen’ny fampianarana ambony amin’ny sekolim-panjakana sy ny tsy miankina, Razafimahatratra Dieudonné.
15 000 Ar ny saran’ny fisoratana anarana ho an’ny mpiadina atolotry ny sekoly, 50 000 Ar ho an’ny mpiadina miahy tena ary 100 000 Ar ho an’ny mpiadina vahiny mianatra eto Madagasikara. Hanomboka ny 24 jolay ka hatramin’ny 28 jolay ny fanadinana bakalorea iarahan’ny fampianarana ankapobeny sy ny teknika ary ny 31 jolay-3 aogositra ny tapany faharoa ho an’ny sampana teknika manokana. Hatramin’izao, manodidina 53 000 ny isan’ny mpiadina nahatonga fisoratana anarana eny amin’ny ofisian’ny bakalorea. Manoloana ny voina nahazo ny faritra maro noho ny rivodoza farany teo, mety ho betsaka ny mpiadina sahirana amin’ny fikarakarana ny antontan-taratasy, ka tokony hodinihina ihany ny momba azy ireo.